ဒယ်လီအယ်လီရဲ့ စတန့်ထွင်မှုကတော့ မပြီးနိုင်သေးပါဘူး
နောက်ထပ် ပုံစံတစ်မျိုး ထပ်ထွင်လိုက်တဲ့ ဒယ်လီအယ်လီ Dele Alli
23 Aug 2018 . 11:31 AM
လက်ချောင်းတွေကို ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ပုံစံတွေ လုပ်ပြတာမှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ စပါးအသင်း ကွင်းလယ်လူ ဒယ်လီအယ်လီ Dele Alli ကတော့ နောက်ထပ် ပုံစံတစ်မျိုး ထပ်ထွင်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ အရင်ပုံစံတုန်းက Dele Alli Challenge ဆိုပြီး နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ အောင်ပွဲခံပုံထက် အခုလုပ်ရမယ့်ပုံစံက ပိုခက်နေသလိုပါပဲ။ အယ်လီဟာ ရာသီအဖွင့်တုန်းက နယူးကာဆယ်ကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းအပြီး လက်မနဲ့လက်ညိုးကို ၀ိုင်း၊ လက်ဖ၀ါးကို ပြောင်းပြန်လှန် မျက်နှာပေါ်ကပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ အောင်ပွဲခံတာမှာ ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း Dele Alli Challenge ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားတွေ၊ ကဏ္ဍအသီးသီးက Celebrity တွေပါ အယ်လီရဲ့ ပုံစံအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလည်း Dele Alli Challenge က ပေါက်မြောက်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းက Celebrity တွေတောင် အဲဒီလို ပုံစံတွေ လိုက်လုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်။ တချို့ကြတော့လည်း အဆင်ပြေသွားပေမယ့် တချို့ကြတော့ အခုအထိ မလုပ်တတ်ကြသေးဘူး။ လုပ်တတ်သွားတဲ့သူတွေက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ပုံတွေ အလုအယက် Post တင်နေတုန်းပဲ ရှိသေး၊ အခု အယ်လီက နောက်ထပ် ပုံစံသစ်တစ်ခုကို ထပ်လုပ်လိုက်ပြန်ပြီ။ ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာ စာနဲ့ မရေးပြတတ်တော့လို့ .. အောက်က ပုံကိုသာ ကြည့်ကြပါတော့။
အဲဒီပုံကို အယ်လီက သူ့ Instagram မှာ ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂိုးသွင်းပြီးရင် အောင်ပွဲခံမယ့် ပုံစံသစ် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အယ်လီက သူ့ Post ကို ပြန်ဖျက်သွားပေမယ့် မီဒီယာတွေက အမိအရ သတင်းယူထားနိုင်ပြီး ဒီသတင်းက လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်း ပြန့်နှံ့နေပါပြီ။ ကဲ ..ပရိသတ်ကြီးရေ၊ ပုံကို သေသေချာချာကြည့်ပြီး အယ်လီ လုပ်သလို လုပ်ကြည့်ရအောင် . . .
Photo:talkSPORT, The Sun, Dele Alli Instagram
နောကျထပျ ပုံစံတဈမြိုး ထပျထှငျလိုကျတဲ့ ဒယျလီအယျလီ Dele Alli
လကျခြောငျးတှကေို ပေါကျပေါကျရှာရှာ ပုံစံတှေ လုပျပွတာမှာ ဆရာတဈဆူဖွဈတဲ့ စပါးအသငျး ကှငျးလယျလူ ဒယျလီအယျလီ Dele Alli ကတော့ နောကျထပျ ပုံစံတဈမြိုး ထပျထှငျလိုကျပွနျပါပွီ။ အရငျပုံစံတုနျးက Dele Alli Challenge ဆိုပွီး နာမညျကြျောခဲ့တဲ့ အောငျပှဲခံပုံထကျ အခုလုပျရမယျ့ပုံစံက ပိုခကျနသေလိုပါပဲ။ အယျလီဟာ ရာသီအဖှငျ့တုနျးက နယူးကာဆယျကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးအပွီး လကျမနဲ့လကျညိုးကို ဝိုငျး၊ လကျဖဝါးကို ပွောငျးပွနျလှနျ မကျြနှာပျေါကပျတဲ့ပုံစံနဲ့ အောငျပှဲခံတာမှာ ပရိသတျတှေ အကွိုကျတှခေဲ့ကွတယျ။
အဲဒီနောကျပိုငျး Dele Alli Challenge ဆိုတဲ့အမညျနဲ့ နာမညျကြျော ဘောလုံးသမားတှေ၊ ကဏ်ဍအသီးသီးက Celebrity တှပေါ အယျလီရဲ့ ပုံစံအတိုငျး လိုကျလုပျကွတဲ့အထိဖွဈခဲ့ပွီး လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာတှပေျေါမှာလညျး Dele Alli Challenge က ပေါကျမွောကျခဲ့တယျ။ မွနျမာပွညျတှငျးက Celebrity တှတေောငျ အဲဒီလို ပုံစံတှေ လိုကျလုပျခဲ့ကွသေးတယျ။ တခြို့ကွတော့လညျး အဆငျပွသှေားပမေယျ့ တခြို့ကွတော့ အခုအထိ မလုပျတတျကွသေးဘူး။ လုပျတတျသှားတဲ့သူတှကေ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ပုံတှေ အလုအယကျ Post တငျနတေုနျးပဲ ရှိသေး၊ အခု အယျလီက နောကျထပျ ပုံစံသဈတဈခုကို ထပျလုပျလိုကျပွနျပွီ။ ဘယျလိုပုံစံလဲဆိုတာ စာနဲ့ မရေးပွတတျတော့လို့ .. အောကျက ပုံကိုသာ ကွညျ့ကွပါတော့။
အဲဒီပုံကို အယျလီက သူ့ Instagram မှာ ဖျောပွခဲ့တာဖွဈပွီး ဂိုးသှငျးပွီးရငျ အောငျပှဲခံမယျ့ ပုံစံသဈ ဖွဈမယျထငျတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ အယျလီက သူ့ Post ကို ပွနျဖကျြသှားပမေယျ့ မီဒီယာတှကေ အမိအရ သတငျးယူထားနိုငျပွီး ဒီသတငျးက လူမှုကှနျရကျတှမှောလညျး ပွနျ့နှံ့နပေါပွီ။ ကဲ ..ပရိသတျကွီးရေ၊ ပုံကို သသေခြောခြာကွညျ့ပွီး အယျလီ လုပျသလို လုပျကွညျ့ရအောငျ . . .